नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गर्ने एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिन्नौंः पोखरेल « Sagarmatha Daily News
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित नहुने ठोकुवा गरेका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रम विपरीत सत्ता गठबन्धनमा खटपट ल्याउनका लागि एमसीसीको विषय उछालिएको उनको तर्क छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेता पोखरेलले भने, “सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला सन् २०१७ मा सम्झौता भएकाले उहाँहरुले सरोकार राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर धेरै विवादित भएको र नेपालको हितमा नभएकाले एमसीसी पारित नगर्ने मात्र होइन खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिविपरीत पारित गर्न खोज्नु मूर्खता हुन्छ ।”
सामान्य पत्राचारबाट हुने कुरालाई संसद्बाट पारित गर्ने या अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुने भन्नुमै दुर्नियत भएको उनको तर्क छ । उनले भने, “अमेरिकाको यस्ता सहायतामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जोडिएको छ । हामी कम्प्रोमाइज गर्ने पक्षमा छैनौं । हामीले ठोस ठोस प्रश्न उठाएका छौं । यो त नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गर्ने षडयन्त्र हो । अमेरिकाले एमसीसी भनेर जम्मा ५० करोड डलर दिने हो, नेपालले त एउटा संस्था एनसेलसँगै ६२ अर्ब कर उठाउन बाँकी छ ।”
अमेरिकाले मूल सम्झौतामा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट गरिसकेकाले अब त्यसलाई पारित गर्नु नहुने उनले बताए । उनले थपे, “नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको सहकार्यको औचित्य के ? एमसीसीको उपाध्यक्ष आउन लागेको बेला चीनसँगको सम्बन्धमा खटपट ल्याएर अमेरिकाको भक्तिभाव देखाउन लाग्नुको अर्थ के हो ? सन् १९६० मै हल गरिसकेको चीनसँगको सीमा विवाद बल्झाएर किन अध्ययन कार्यदल बनाउने ? ८१ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको विषयमा पनि बोल्नुपर्यो नि ।”
थेगेन रिपोले तरलता अभाव, बैंकहरु एसएलएफको भर पर्दै
काठमाडौं । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको चर्चा सुरु हुने बित्तिकै आर्थिकन्युजको जिज्ञासामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका